လူတစ်ယောက်မှာ စိတ်က အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ဆိုတာက လူတစ်ယောက်ကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အရာဖြစ်ပြီး စိတ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အပြုအမူတွေက ကွဲပြားသွားပါတယ်။ စိတ်က လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားမှု၊ တွေးခေါ်မှု၊ ထိတွေ့မှု၊ ဆုံးဖြတ်မှု၊ ဘာသာစကား၊ ပုံဖော်မှုနဲ့ အမှတ်တရတွေမှတ်ထားနိုင်မှု စတာတွေ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ထောင်းလို့ ကိုယ်ကျင်ဆိုသလို စိတ်အခြေအနေမကောင်းရင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေက အဆင်မပြေတော့ဘဲ အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ကိုအမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်အောင် ထားသင့်ပါတယ်။ စိတ်ပျော်ရွှင်နေမှ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်မှုတွေ အဆင်ချောနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေနေတွေက အရမ်းစိုးရိမ်စေပြီး ကြောက်စိတ်တွေပိုဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းချုပ်ဖို့က ပိုခက်ခဲလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုချိန်တွေမှာ စိတ်ကို အနားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အနားယူတဲ့အခါမှာ စိတ်ရော၊ ခန္ဒာကိုယ်ကိုရော အနားပေးရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သေချာအနားပေးပါ။
နောက်ပြီး ကိစ္စတစ်ခုကို အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် စဉ်းစားပြီး အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့အတွက် လွယ်လွယ်နဲ့မဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်က လူတစ်ယောက်ရဲ့ အပြင်ပန်း ခန္ဓာကိုယ်ထက် အများကြီး အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်မလိုက်နိုင်ရင် ခန္ဓာကိုယ်လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး။
စိတ်ညစ်/စိတ်ရှုပ်စရာ၊ ဒေါသထွက်စရာ၊ အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ကြုံလာရပါများရင် Excessive Frustration လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ထဲအခဲမကြေဖြစ်မှုတွေ မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ပင်ပန်းတာများလာရင် လူကခြေကုန်လက်ပန်းကျလာမှာပါ။ အဲ့ကျရင် အိပ်မပျော်/စားမဝင်ခြင်း၊ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ လူတွေကို အကောင်းမြင်စိတ်မရှိတော့ဘဲ ဒေါသတွေပဲထွက်နေခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ကိစ္စအချို့ကို လက်လျော့ခြင်း စတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Anxiety တွေကို ဘယ်လို ထိန်းချုပ်ကြမလဲ?
ရေသောက်ခြင်းက စိတ်ပူပန် စိုးရိမ်မှုတွေကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ စိတ်အရမ်းညစ်လာတဲ့အခါ ရေပန်းအောက်မှာ ရေချိုးခြင်း ဒါမှမဟုတ် ရေစိမ်ခြင်းက သက်သာစေပါတယ်။ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ရေတစ်ခွက်ကို အားရပါးရသောက်လိုက်တာက စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။
Meditate လုပ်တာဟာ ဘယ်လိုအခြေနေမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ် အကျိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးဘယ်လူမျိုးမဆို လုပ်လို့ရတဲ့အတွက် စိတ်ကိုပိုပြီးသန်မာစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၁၅မိနစ်လောက်တရားထိုင်သင့်ပါတယ်။
3. အတတ်နိုင်ဆုံး Positive Thinking လုပ်ခြင်း
ကိုယ့်မှာ စိတ်ညစ်စရာတွေ တစ်ခုခုရှိရင် အဲ့အရာကိုပဲ အမြဲတွေးနေဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ အခက်ခဲဆိုတာ အခုအဆင်မပြေရင်တောင် အချိန်တစ်ခုပေးလိုက်တဲ့အခါ ဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကောင်းတာလေးတွေတွေးပြီး စိတ်ကိုဖြေသိမ့်ပါ။
4. Negative Thinking ကိုရှောင်ခြင်း
ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိပ်စက်မယ်ဆိုရင်တော့ Negative Thinking က အကောင်းဆုံးပါ။ Depression ပါဝင်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေနိုင်လို့ပါ။ ဒါ့ကြောင့် Negative Thinking ဘက်မရောက်အောင် အမြဲသတိပေးနေပါ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်မှုတွေမှာ စိတ်ကြည်လင်နေဖို့က အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကြည်နေဖို့က အိပ်ရေးဝဖို့လိုပါတယ်။ နောက်ပြီး စိတ်ဆတ်လာပြီး နေရထိုင်ရအဆင်မပြေရင် အချိုများများစားပေးပါ။ အချိုစားပေးခြင်းက စိတ်ကြည်စေပါတယ်။ နောက်ပြီး ဗိုက်ဆာနေရင် စိတ်တိုတတ်တာမို့လို့ အစားအသောက်ကိုလည်း အချိန်မှာစားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာတဲ့အခါ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် အရာတွေကို ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်ပါ။ တစ်ခါတစ်လေ စိတ်တွေအရမ်းပူလာတဲ့အခါ စိတ်သက်သာစေမယ့်အကြောင်းတွေကို များများတွေ၊ များများပြောပါ။ ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေက စိတ်ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်တာကြောင့် စိတ်မပင်ပန်းစေမယ့် အရာတွေကိုလုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။